काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै कम - काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै कम -
काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै कम
४ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:३३ । काठमाडाैं
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरको तापक्रम घट्दै गएको छ । आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम पाँच दशमलव छ डिग्री मापन गरिएको छ । बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम छ दशमलव शून्य डिग्री थियो ।
मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार देशभर चिसो बढ्दै जाने क्रममा रहेको छ । “तापक्रम घट्ने क्रममा छ । अब चिसो क्रमशः बढ्दै जान्छ”, मौसमविद् अर्यालले भने । दिनभर घाम लागे पनि बिहान र बेलुका जाडो बढेको महसुुस भएको छ । मौसमविद्का अनुसार पानी प¥यो भने अझै जाडो बढ्छ । तत्काललाई पानी पर्ने सम्भावना रहेको छैन । वर्षा गराउने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको बताइएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशका धेरै स्थानमा न्यूनतम तापक्रम घट्नाका साथै तराईका भूभागमा बिहान पारदर्शितामा कमी भई सडक तथा हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम पाँच दशमलव छ डिग्री र अधिकतम तापक्रम २२ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस दुई दशमलव पाँच डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको न्यूनतम तापक्रम १४ दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियस छ ।
शहिद पाख्रिनको १८ औं स्मृति दिवस मनायो
ऐतिहासिक स्वयम्भू क्षेत्रको संरचना नभत्काउन माग
स्व. पुष्करलालको ‘यात्रा विदेशको चिन्ता स्वदेशको’ सार्वजनिक
महासंघको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा
बिप्लवको पार्टीमा यौन र पैसाको लफडा
फिल्म क्षेत्रका संघसंस्थाहरु एकजुट हुने
१. गायक रोमको च्याङ्ना माया यूट्यूवमा
२. नेकपाद्वारा जनप्रतिनिधिलाई प्रगति विवरण माग
३. शहिद पाख्रिनको १८ औं स्मृति दिवस मनायो
४. निजगढमा १५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास
५. ऐतिहासिक स्वयम्भू क्षेत्रको संरचना नभत्काउन माग
६. फापारे व्हाइ गायन प्रतियोगिताको बिजेता बने प्रेम घिसिङ र मेलिना योन्जन
कक्षा–१२ को परीक्षा समय डेढ घन्टा मात्र, ४० अंकका लागि परीक्षा